Ntụgharị asụsụ ibe weebụ bụ mbọ n'eziokwu iji dee ozi nke Neal V. Frisby site na okwu CD ya.
Akwụkwọ Nsọ na Pịgharịa na eserese
Akwụkwọ mpịakọta amụma
Amụma mpịakọta PDF
Akwụkwọ Ozi Nkwukọrịta
Nkwadebe maka ọpụpụ
Jizọs na-abịa n'isi nso!
Ntughari akwukwo ntughari bu uzo iji gosiputa ozi Neal V. Frisby site na okwu CD ya. Ebumnuche bụ ịmekwu ohere maka ndị mmadụ ịmara nke ọma na ozi ndị a sitere n'ike mmụọ nsọ ọkachasị ndị na-ahọrọ ịgụ kama ị listeninga ntị na okwuchukwu site na usoro CD.
Biko gwa gị na njehie ọ bụla na ịdegharị ozi ndị a abụghị na a ga-asị na ọ bụ ozi izizi kama ọ bụ mmejọ sitere na mbọ ndị na-edegharị; nke anyị na-ebu ọrụ. Anyị na-agbakwa ndị mmadụ ume ka ha gee ntị na ozi CD mbụ.
Ndị chọrọ inweta CD nke mbụ, DVD na akwụkwọ nke Neal Frisby nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ Neal Frisby site na njikọ njikọ - www.nealfrisby.com Ọzọkwa maka ajụjụ banyere ndị a transcriptions na-ezigara anyị ozi site na adreesị anyị.
N'ezie anyị nọ na njedebe nke afọ. Anyanwụ na-adakwasị mba ukwu a na ụwa dum. Nnwere onwe dị ka anyị si mara ha ga-apụ n'anya n'oge na-adịghị anya. Ikike nke ịgba akaebe ezi ozi ọma a na-emechi n'oge na-adịghị anya. Mba a malitere site n'oké mgba maka nnwere onwe na ikike ịhọrọ ezi okwu Chineke. Dị ka mmadụ pụrụ ịhụ, oké mkpagbu na-abịakwasị mba nile ndị kwere na ezi Chineke ahụ. N’ọnwa a, anyị ga-enwe nhota pụrụ iche sitere n’ọ́bá akwụkwọ Nwanna Frisby iji weta mkpa ọ dị ịgba àmà n’oge awa a. Chineke nọnyeere ndị Ya ịrụ ọrụ ngwa ngwa, nke dị mkpụmkpụ na nke dị ike, n'ihi na nke a bụ oge awa nke ọnwụnwa nke Akwụkwọ Nsọ kwuru ọtụtụ mgbe. Mkpu. 3:10, “N’ihi na i debere okwu nke ntachi-obi m, m ga-echebekwa gị pụọ n’oge awa nke ọnwụnwa, nke ga-abịakwasị ụwa nile, iji nwapụta ndị bi n’elu ụwa.” Ma ugbu a okwu sitere na Neal Frisby. Nke a bụ oge owuwe ihe ubi n'ezie! Naanị ihe anyị na-emere Jizọs ga-adịru mgbe ebighị ebi. Ihe ndị ọzọ niile dị n’ụwa ga-ala n’iyi ma ọ bụ daa! – “Ma mkpụrụ obi nke kwere ekwe dị oké ọnụ ahịa n’ihu Chineke! – Nke a ga-eleghị anya na-eweghachite ọtụtụ ihe ncheta, ma ị nụwo ochie ozi ọma song 'Na-eweta na ùkwù ọka.' - Ee, ọ nweghị ọtụtụ oge fọdụrụ ime nke a. " – “N’oge na-adịghị anya ikpere ọ bụla ga-ehulata n’ihu Jizọs ma ire ọ bụla ga-ekwupụta dị ka Akwụkwọ Nsọ si kwuo! Ịgba ama na ịzọpụta mkpụrụ obi anyị ga-abụ ihe kacha mkpa n'oge anyị ga-ahụ Ya! Ọ maara ihe niile onye ọ bụla n’ime anyị ga-eme!” - "Ụbọchị ahụ adịla anya, anyanwụ nọ na elekere efu! Abalị na-abịa dị ka onyinyo gbara ọchịchịrị na-agbasa n'ebe anyị nọ! Ime ngwa nke Mọ Nsọ nāsi, nālunu ọlu mb͕e ìhè nādi kwa; n’ihi na ọchịchịrị nke mmehie na ọchịchị aka ike ga-eweghara ụwa a n’isi nso.” Isa. ABÙ ỌMA 43:10 “Unu onwe-unu bu ndi-àmàm, ka Jehova siri, na orùm nke M'rọputaworo: ka unu we mara we kwerem, ghọta na Mu onwem bu Ya: ọ dighi Chineke kpuworo n'irum, ọ dighi kwa orùm nke M'rọputaworo; m!” Anyị nọ n'oge awa nke ike na-amanye ịbanye n'okporo ụzọ awara awara na ogige! Oku oku nke nri abalị agwụla! – “Nụrụnụ okwu Jehova; n’ihi na oké mkpagbu ahụ e buru n’amụma ogologo oge gara aga na-abịaru nso. Dị ka mmadụ si ahụ ígwé ojii ka o si n’ebe dị anya na-abịa, otú ahụ ka ọ ga-adị na mberede n’elu ndị chefuru Onye kere ha!” - A ga-ebuli ndị kwesịrị ntụkwasị obi elu ma nyefee ụwa n'aka ndị ajọ omume na ndị ajọ omume! Anyị nọ n’oge awa ahụ Ọ sịrị, “Ozugbo ọ na-etinye mma iwe ihe ubi ozugbo, n’ihi na owuwe ihe ubi abịawo!” (Mak 4:29) Nke a na-egosi na ọ ga-abụ ọrụ dị ngwa, ngwa ngwa na nke dị mkpụmkpụ. Dịka Ọ sịrị, “Lee m na-abịa ọsọ ọsọ.” - Igosi ihe omume ga-abụ na mberede wee mee ngwa ngwa! – Ihe ịtụnanya a na-atụghị anya ya nye ụwa. Na mberede, ndị nzuzu ga-ama na ndị ahọpụtara apụọla! "Ya mere, ugbu a n'oge owuwe ihe ubi nke mmiri ozuzo ikpeazụ, ọrụ ya kasị mkpa, dị mkpa amalitela ime!" Anyị kwesịrị inwe ekpere n’ime obi anyị kwa ụbọchị dịka ike mmụọ nsọ na-eweta ụmụ ikpeazụ nke Onye-nwe. Ụwa na-aga n'ihu maka ihe ndapụta na-atụ n'anya na nke a na-atụghị anya ya iji mezuo amụma banyere ụka na ọchịchị ọjọọ nke si n'ezi ofufe dapụ! Banyere isiokwu ndị a na ọrụ owuwe ihe ubi nke ozi-ọma, Onye-nwe na-emezu amụma ma na-enye ụdị ihe iriba ama dị iche iche iji kwado nso nso ya! “Eluigwe na-akọ ya, ihe ịrịba ama dị n’oké osimiri, ọkụ mgbawa nke ụwa na-ebukwa amụma ya!” Oké osimiri na-ebigbọ, ala na-amakwa jijiji! Ọtụtụ mba nọ n'ọgwụgwụ ha. Oge dị egwu! Ma anyị makwaara na mgbe aku na uba nsogbu ndị Bible na-ekwu na onye ọchịchị aka ike ga-eweta ụwa ọganihu na nnukwu mgbanwe gụnyere structural. (Dan. 8:25) Ya mere, anyị maara na onyinyo nke Onye Ọchịchị Rom nọ n’ụwa ebe a ma dị njikere ibili! Ihe omume ndị dị mkpa na-abịa n'oge na-adịghị anya na n'ụbọchị ndị dị n'ihu. Jide n'aka ma lezie anya ụbọchị ndị dị n'ihu ka Chineke na-egosipụta ọtụtụ ihe ịrịba ama amụma gbasara njedebe nke oge a! – “Oké mkpu etiti abalị na-adakwasị ndị Ọ họpụtara.” - “N'ezie, ihe ndị a nile ezuola ime ka Onye Kraịst ọ bụla nwee uche na ịmụrụ anya. N'ihi na ihe ịrịba ama n'ebe na-agwa anyị na ọ bụ ọbụna n'ọnụ ụzọ!" Ngụ ngwụcha. Akwụkwọ ozi a kwesịrị ime ka Onye Kraịst ọ bụla ghọta na ọ dị anyị ka anyị kwesịrị ịgba àmà ngwa ngwa nakwa na mmadụ niile kwesịrị itinye mgbalị kacha mma. N’ọnwa a anyị na-ewepụta Mpịakọta Nke Mbụ – Akwụkwọ nke Akwụkwọ Ozi kwa ọnwa (June 2005 ruo Julaị 2008) yana DVD pụrụ iche, “Onye Ọ bụla ga-eme”. (Lee onyinye n'okpuru.) - Ịtụkwasị obi na ndị mmekọ niile ga-aga n'ihu na nkwado ha dị mkpa nke ozi a dị mkpa. Chineke etinyewo ngọzi magburu onwe ya n’ahụ́ ndị nile guzoworo n’azụ ozi a. Enwere m ekele maka nkwado niile e nyere n’ozi a. Ọtụtụ mkpụrụ obi ka a zọpụtala ma dọọ aka ná ntị banyere oge awa a nke anyị na-ebi na ya.
Vidio na ọdịyo
Akaebe nke eluigwe na ala mmụọ
Otu Onye Ohi Egwuregwu n'abalị
Ndụmọdụ Neal Frisby
Ihe atụ Ntụgharị
Gbagburu Christian Agwọ Ọrụ ebube
Pịa ebe a maka Akwụkwọ Nsọ wee pịgharịa na eserese
Akwụkwọ mpịakọta amụma Neal Frisby
Ugbu a dị na mpịakọta I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX na X
Jụọ maka akwụkwọ nta gị mara mma ugbu a!
Maka akwụkwọ, CD na vidiyo
Ọ bụrụ n'Africa, maka akwụkwọ ndị a na Traktị
ma ọ bụ kpọọ + 234 703 2929 220
ma ọ bụ kpọọ + 234 807 4318 009
"Mgbe anyị pụọ, ha ga-ekwere."
Copyright © 2020 Ihe Ntụgharị Asụsụ Okwu. Ikike niile echekwara.
mere na Companylọ ọrụ mmepe ngwanrọ Tiyan